Xildhibaankii laga saaray Xisbiga Himilo Qaran oo cadeeyay mowqifkiisa – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Dec 3, 2019
Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay go’aankii uu shalay Xisbigii uu ka tirsanaa ee Himilo Qaran ay uga joojiyeen xubninadiisii xisbiga.
Xildhibaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka Bulshada waxa uu ku sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabada uu qaaday xisbigu, maadaama sida uu sheegay ay isku ku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah, isaga iyo xubnaha qaar ee Xisbiga.
Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay isku aragti ka noqdeen arrimaha Galmudug, si loo dhiso maamul loo dhan yahay.
Xildhibaan Cabdixakiin ayaa mar kale ku celiyey oo ku adkaystay qormadii Xisbiga looga saaray ee aheyd in ciidamo Itoobiyaan ah aan la geyn magaalada Dhuusamareeb, waxuuna saaxiibadiis ka dalbaday inay doodooda ah ciidamada Itoobiya ee la geeyay Dhuusamareeb ay cadeyn u keenaan.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Xil. Cabdixakiin:
Xubnaha Xisbiga qaarkood waxaan aad ugu kala aragti duwanaanay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaado laga huriyo deegaanka aan anigu matalo ee Dhuusamareeb, iyo guud ahaan Galmudug, si fowdadaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin.
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan isku aragti ka noqonay arrimaha ku saabsan dhismaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo ka shaqeynteedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matalo dadka iyo deegaanka Galmudug taas ayaana keentay in xubnaha qaar ay u cuntamiwaysay
Majiro ciidan itoobiyaan ah oo aan kan AMISOM ahayn oo dhuusamareeb jooga, laakiin waxaan rabaa in aan caddeeyo Marnaba in aanan raalli ka noqonaynin, in Ciidan Itoobiyaan ah iyo mid kale toona ay farageliyaan nidaamka doorashada ee Galmudug, sidoo kalana lama aqbali karo in buunbuunis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiin iyo doorasho ee Galmudug.
Qofka awoodi waayay in uu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filaayo in uu awoodi karo hugaaminta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Nabadoonno kale oo lagu xiray Boosaaso iyo waxa la isku hayo
DFS oo digniin ka soo saartay roobab dabeylo wata oo ku soo wajahan dalka